China Customs Union- EAC, GOST-R Ọrụ na Ule | MCM
Gịnị bụ Nkwupụta GOST-R?
Nkwupụta GOST-R nke Mmekọrịta bụ akwụkwọ nkwupụta iji gosipụta na a na-agbaso ngwaahịa iwu nchekwa Russia. Mgbe enyere iwu nke ngwaahịa na asambodo nke Russian Federation na 1995, usoro asambodo ngwaahịa mmanye malitere na Russia. Ọ chọrọ ngwaahịa niile erere n'ahịa Russia ka e bipụta ya na akara asambodo GOST.
Dịka otu n'ime usoro nke asambodo nnabata iwu, Nkwupụta Gost-R nke ntọala ntọala na akụkọ nyocha ma ọ bụ asambodo njikwa njikwa mma. Na mgbakwunye, Nkwupụta nke Nkwekọ nwere njirimara na enwere ike inye ya ụlọ ọrụ iwu Russia nke pụtara na onye nyocha (njide) nke asambodo ahụ nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ gọọmentị Russia edenyere aha ma ọ bụ ụlọ ọrụ mba ọzọ edebanyere aha na Russia.
Cladị Nkwupụta ▍GOST-R na Ndaba
1. AKW .KWỌ Stinye Nkechihipmenti Ckpochapụ
Single Mbupu akwụkwọ bụ naanị na ọdabara ka kpọmkwem ogbe, kpọmkwem ngwaahịa kwuru na a nkwekọrịta. Ozi doro anya na-achịkwa, dịka aha aha, oke, nkọwapụta, nkwekọrịta na onye ahịa Russia.
2. Certificate na ndaba nke otu afọ
Ozugbo enyere ngwaahịa maka asambodo ahụ, ndị nrụpụta nwere ike ibupụ ngwaahịa na Russia n'ime afọ 1 na-enweghị oke mbupu oge na ọnụọgụ maka ndị ahịa akọwapụtara.
3. Ckpochapụ na ndaba nke afọ atọ / ise
Ozugbo enyere ngwaahịa maka asambodo ahụ, ndị nrụpụta nwere ike ibupụ ngwaahịa na Russia n'ime afọ 3 ma ọ bụ 5 na-enweghị oke mbupu oge na ọnụọgụ maka ndị ahịa akọwapụtara.
MCM nwere otu ndị injinia iji mụọ iwu kachasị ọhụrụ nke Russia, na-ahụ na enwere ike ịkekọrịta akụkọ ntinye akwụkwọ GOST-R nke ọma na oge na ndị ahịa.
MCM na-ewulite mmekorita ya na mpaghara nke nzukọ asambodo izizi, na-enye ndị ahịa ahịa nnabata.
▍Gịnị bụ EAC?
Dabere na Tya Iwu na-achịkwa usoro iwu dị mkpa maka Kazakhstan, Belarus na Russia nke bụ nkwekọrịta nke Russia, Belarus na Kazakhstan bịanyere aka na Ọktọba 18 2010, Kọmitii Customlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ahịa ga-etinye aka n'ichepụta ụkpụrụ na ihe achọrọ iji hụ na nchekwa nke ngwaahịa. Otu asambodo dị maka mba atọ, nke bụ asambodo Russia-Belarus-Kazakhstan CU-TR yana akara akara EAC. Iwu tinye n'ọrụ nwayọọ nwayọọ site na February 15Nke 2013. Na Jenụwarị 2015, Armenia na Kyrgyzstan sonyeere Customs Union.
CertificateCU-TR Asambodo anddị na Ndaba
Nkechitinye Nkechihipmenti Ckpochapụ
Single Mbupu akwụkwọ bụ naanị na ọdabara ka kpọmkwem ogbe, kpọmkwem ngwaahịa kwuru na a nkwekọrịta. Ozi doro anya na-achịkwa kpamkpam, dịka aha aha, ọnụọgụ, nkwekọrịta nkọwapụta yana ndị ahịa Russia. Mgbe ị na-achọ maka asambodo ahụ, anaghị arịọ ka ịnye ma ọ nweghị akwụkwọ yana ozi achọrọ.
Ckpochapụ na ndaba nke otu afọ
Ozugbo enyere ngwaahịa ka asambodo ahụ, ndị nrụpụta nwere ike ibupụ ngwaahịa na Russia n'ime afọ 1 na-enweghị oke mbupu oge na oke.
Akwụkwọ na ndaba nke atọ afọs
Ozugbo enyere ngwaahịa ka asambodo ahụ, ndị nrụpụta nwere ike ibupụ ngwaahịa na Russia n'ime afọ 3 na-enweghị oke mbupu oge na oke.
Akwụkwọ akaebe maka afọ ise
Ozugbo enyere ngwaahịa maka asambodo ahụ, ndị nrụpụta nwere ike ibupụ ngwaahịa na Russia n'ime afọ 5 na-enweghị oke mbupu oge na oke.
● MCM nwere otu ndị ọkachamara ọkachamara pf iji mụọ ụkpụrụ njikọ nke asambodo kachasị ọhụrụ, yana iji nye ọrụ ntinye ọrụ dị nso, na-eme ka ngwaahịa ndị ahịa banye mpaghara ahụ nke ọma na nke ọma.
● Akụnụba bara ụba echekwara site na ụlọ ọrụ batrị na-enyere MCM aka ịnye ọrụ dị mma ma dị ọnụ ala maka ndị ahịa.
MCM na-ewulite mmekorita ya na ndị otu dị mkpa dị na mpaghara, na-eme ka ndị ahịa nweta ozi ọhụrụ nke CU-TR asambodo.
Osote: America, Canada- cTUVus & ETL
Akwụkwọ Gost R
Akaụntụ Gost R
Ahịa Asambodo Gost R
Usoro Gost R Asambodo
Ọrụ Asambodo Gost R
Gost R Lead Oge
Okwu Gost R
Akụkọ Go Go R
Gost R chọrọ
Gost R nkọwapụta
Gost R Nka na ụzụ Akwụkwọ
Gost R Nka na ụzụ chọrọ
Nyocha Gost R
Gost R Ule Ihe
Usoro Nyocha Gost R
Akụkọ Nlekọta Gost R
Stlọ nyocha Ule R G
Stlọ nyocha nyocha Gost R
Akwụ ụgwọ Gost R
Ọrụ Nlekọta Gost R
Oge nyocha Gost R